Bandowga Muqdisho oo dib loogu celiyay 8-da Fiidnimo iyo xil ka qaadis lagu sameeyay Taliye Saldhig - Jowhar Somali Leader
Home Somali Bandowga Muqdisho oo dib loogu celiyay 8-da Fiidnimo iyo xil ka qaadis...
Bandowga Muqdisho oo dib loogu celiyay 8-da Fiidnimo iyo xil ka qaadis lagu sameeyay Taliye Saldhig
Taliyaha Booliska Soomaaliya Jen. Cabdi Xasan Xijaar ayaa ku dhawaaqay in Bandowgii 7-da Fiidnimo ee bisha Ramadaan dowladdu ku soo rogtay la qaaday, dibna loogu celiyay 8-da fiidnimo, kaddib banaan bax rabshado watay oo ka dhashay dil xalay ka dhacay degmada Boondheere waqtigii bandowga bilaabanayay.
Shir jaraa’id oo ay wadajir xarunta dowladda Hoose ugu qabteen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Booliska ayay uga hadleen xaaladii banaan baxa iyo dilkii xalay dhacay, waxaana ay si wadajir u sheegeen in askariga dilka geystay gacanta lagu haayo, lana horkeeni doono Maxkamad.
Taliyaha Booliska ayaa sheegay in Bandowga laga dhigay 8-da Fiidnimo, sidoo kale waxaa uu caddeeyay inay dadku socon karaan wixii doonaya adeeg.
Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay in xilka laga qaaday taliyihii Saldhiga Booliska degmada Boondheere Najiib Carab, kaddib dhacdadii xalay askari ka tirsan saldhiggaas uu labo qof shacab ah ku dilay degmadaas.
Banaan baxyadii rabshadaha watay ee xalay illaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa si weyn u saameeyay magaalada, taasoo keentay in dowladda ay qaadato go’aan ay wax uga badasho bandowgii 7-da fiidnimo ee badi dadka Muqdisho ay ka soo horjeedeen.